Goodax oo eedeyn u jeediyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh | Most Reliable News Source
Mar 21, 2018 - Comments off
Xildhibaan C/llaahi Goodax Barre oo ka mid ah Xildhibaanada mooshinka ka keenay Guddoomiye Jawaari ayaa ku eedeeyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu qas ka wado Baarlamaanka. Xildhibaan Goodax oo ka qeyb galayay barnaamij dood ah oo ka baxayay Telefishinka Somali Cable ayaa sheegay in Xasan Sheekh iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ay qeyb ka yihiin xaalada siyaasadeed.
“Waxaa xaqiiqa ah oo shaki aan ku jirin Xildhibaano kooban oo ka tirsan nidaamkii hore ee Damul jadiid la dhihi jiray ee damacsan Xukuumaddaan inaysan maalin horay u socon, Madaxweynahooda oo tuute gashtay oo xero u guuray in la fur furo oo la cambaareeyo oo dowladii ay shaqeyn wayso waa damiir xumo, Baarlamaanka isaga oo matalaya umadda Somaliyed waa in la dhahaa naga fariista Xildhibaanadaasi”ayuu yiri Xildhibaan Goodax Barre.
Mr Goodax ayaa sheegay in Xasan Sheekh uu adeegsanayo Xildhibaanada ka tirsan Baarlamaanka, gaar ahana kuwa isaga taabacsan, isla markaana uu taleefano kula soo hadlayo sida uu yiri. “Xasan Sheekh xalay dad ayuu soo la soo hadlayay oo Xildhibaano ah oo taleefoonka ka soo wacaayay sidaasi yeela ayuu dhahayay, dad la hadlay ayaan la sheekeystay aniga”ayuu yiri Goodax.
Waxaa uu ammaanay Madaxweyne Farmaajo oo uu sheegay inuu tuute xirtay, isla markaana degay Wasaaradda Gaashaandhigga, kana wado abaabul dagaal, balse ay jiraan Xildhibaano xagal daacinaya horumarka dowladda ku tallaabsatay sida uu yiri. Xildhibaan Goodax ayaa ka mid ahaa xubnihii aadka u mucaaradsanaa markii dambe dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana uu ku caan baxay inuu mar walba si shaqsi u weeraro, taasoo dad badan la yaabeen inuu wali daba taagan yahay.